IMDB: 7.1/10 208,827 votes
Rustom:3shoots (2016) ကဲဗျာ ဒီတခေါက်တော့ အလန်းစား Bollywood တကားကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ ဇာတ်ကားလေးက တော့ တော်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကားလေးပါ ရပ်စတန်ဆိုတဲ့ ရေတပ်ဗိုလ်အရာရှိဟာ တာဝန်ပြီးလို့ အိမ်ကိုပြန်လာရာမှာ မထင်မှတ်ပဲ သူ့မိန်းမ နဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ရဲ့ စာပေးစာယူ တွေကို လက်ပူးလက်ကြပ်မိရာမှ သူ့မိန်းမရဲ့ အပြင် လူကို မထင်မှတ်ပဲ လက်လွန်ပြီးသက်မိသွားခဲ့ရာမှ ကိုယ်တိုင် ရဲစခန်းမှာ သွားရောက်ဝင်ခံ အဖမ်းခံခဲ့ပါတယ် သူ ကိုယ်တိုင်သတ်ခဲ့မိတာလား ဒါမှ မဟုတ်တခြားတယောက်က သတ်ခဲ့တာကိုများ ကြားထဲက ၀င်ရောက် အဖမ်းခံရတာလား ဒါတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ လှည့်ကွက်ကြီးရှိနေသောအခါမှာတော့ ..................... (ဘာသာပြန်သူကတော့ သာရစ် အယ်လ် ၀ါကာဖြစ်ပါတယ်)
Rustom:3shoots (2016)
Nerve (2016) Nerve (2016) Trailer Review လေးရေးမလို့ :D “Nerve” သရုပ်ဆောင်တွေ က Emma Roberts နဲ့Dave Franco ။ ဒီနေရာမှာ ရုပ်ရှင်အကြောင်းထက် သရုပ်ဆောင်အကြောင်းအရင်ပြောချင်တယ်။ ဒီကား Trailer ကြည့်ပြီးတဲ့ သဘောကျသွားတဲ့တစ်ချက်ကတော့ မင်းသား မင်းသမီး ရွေးချယ်မှုပဲ (juz my opinion) ... Dave Franco 2010 နောက်ပိုင်း ကောင်မလေးတွေ ကြွေတဲ့ စာရင်းမှာ ပါလာတဲ့ မင်းသားတစ်လက်ဆိုမမှားပါဘူး။သူ့ ကို လူသိများလာစေတဲ့ရုပ်ရှင်တွေက 21JumpStreet, 22JumpStreet, Now You See Me, Now You See Me2and Neighbors ခေါင်းဆောင်မင်းသားအနေနဲ့ ပါဝင်ခဲ့တာမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး။ အခု NERVE က သူ ခေါင်းဆောင်မင်းသားအဖြစ်ပါဝင်မယ့်ဇာတ်လမ်း ။ ဟုတ်ပြီ Emma Roberts အကြောင်းဆက်ပြောမယ်။ Emma Roberts ကိုယ့်အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ AQUARMARINE ...
Udta Punjab (2016) IMdb 8.0/10 ရထားတဲ့ အိန္ဒိယ အလန်းဇာတ်ကားတကားကို ဘောလိဝုဒ် ပရိတ်သတ်ကြီး အတွက်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ဇာတ်ကား က ပန်ဂျပ်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး အကြမ်းဖက်မှုတွေ အကြောင်းကို ရိုက်ကူးပြထားတာဖြစ်ပြီး ယခုနှစ် ဂျွန်လ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ထွက်ရှိထားတာဖြစ်ပါတယ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မင်းသားမင်းသမီးတွေကလည်းဘောလိဝုဒ် ပရိတ်သတ်ကြီးနဲ့မစိမ်းတာမို့ မိတ်မဆက်ပေးတော့ပါဘူး ဒီဇာတ်ကားဟာ ကုန်ကျစရိတ် ၅.၉ သန်းကုန်ကျခဲ့ပြီး ၁၅သန်းထိအောင် ၀င်ငွေရရှိကာ ၀က်ဝက်ကွဲအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကားတကားဆိုလည်းမမှားပါဘူး ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းလေးကတော့ တော်မီဆင်းလို့ သိကြတဲ့ ရှာဟစ်ကူးပါး ဟာ လန်ဒန်ဖွား ပန်ချာပီတယောက်ဖြစ်ပြီး အော်မြင်တဲ့ အဆိုတော်တယောက်ပါ တနေ့မှာ သူဟာ ဆေးသမား တာယာဂျီနဲ့ ဆုံတွေ့မိပြီး ဆေးစသုံးခဲ့မိပါတယ် ဘာဟာရီ သူကတော့ စိုက်ခင်းကအလုပ်သမလေးဖြစ်ပြီးသူ့အိမ်မက်ကတော့ နိုင်ငံတော်အဆင့်ထိရွေးချယ်ခံထားရတဲ့ လက်ရွေးစင် ဟောကီကစားသမားတယောက်ဖြစ်ဖို့ပါ တနေ့မှာသူဟာ စိုက်ခင်းထဲမှာ အထုပ်တထုပ်ကိုတွေ့ပြီးဖွင့်ကြည့်ခဲ့မိပြီး ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျ ပြီးဘယ်လိုတွေများဆက်ဖြစ်မလဲ ပရီရှာနီ သူကတော့ ဆရာဝန်တတယောက် သူ့အဓိကအလုပ်က ဆေးဖြတ်တဲ့ဆေးရုံမှာ အလုပ်လုပ်တာပါ သူ့သူငယ်ချင်း ဆာတာဆင်းဂ်ျ ကတော့ ဆေးမှောင်ခိုမှုတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး နာမည်ကြီးတဲ့ ရဲတယောက်ပါ တနေ့မှာတော့ ...
Taken(1+2+3) Package Taken (2008)________IMDb - 7.8/10ဒီဇာတျကားက ကြှနျတေျာ့ အကွိုကျဆုံး ဇာတျကားတှထေဲက တဈကားဖွဈပါတယျ။ ဇာတျလမျးအကွောငျးကိုပွောရရငျ........ မငျးသားက အရငျတုနျးက CIA ကစုံထောကျ၊ ၁၇နှဈအရှယျ သမီးလေးတဈယောကျရှိပါတယျ။ Liam Neeson က သူသြှို၊စုံထောကျဆိုတော့ မိသားစုအတှကျ အခြိနျမပေးနိုငျလို့ မိနျးမနဲ့ကှာရှငျးပွီးနောကျ သမီးလေးကိုပါ မိနျးမလကျထဲထညျ့ပေးလိုကျရပါတယျ။ သူက သူ့သမီးလေးကိုအရမျးခဈြတော့ CIA ကနေ အနားယူပွီး သမီးလေးနားမှာနနေိုငျအောငျ ကွိုးစားနတေဲ့ အဖနေရောက သရုပျဆောငျတာပါ။ Bryan (Liam Neeson ရဲ့ဇာတျကောငျ) ရဲ့သမီး Kim (Maggie Grace ရဲ့ဇာတျကောငျ) က တဈနမှေ့ာ သူငယျခငျြးရယျ ပွငျသဈနိုငျငံ ပဲရဈမွို့ကိုသှားလညျဖို့ ဖခငျကိုတောငျးဆိုပါတယျ။ (အမရေိကားမှာ ၁၈နှဈအောကျကလေးတှကေ ပွညျပခရီးသှားခငျြရငျ မိဘခှငျ့ပွု့တဲ့လကျမှတျပါမှ သှားလို့ရပါတယျ)။ သူ့အဖကေ မသှားစခေငျြပမေယျ့ နောကျဆုံးမှာ မတတျသာလို့ခှငျ့ပွုလိုကျရပါတယျ။ ပဲရဈကိုရောကျရောကျခငျြးမှာပဲ Kim နဲ့သူ့သူငယျခငျြး က ကောငျလေးတဈယောကျနဲ့တှပွေီ့း ...
Drishyam (2015) MDb (8.2/10)...Rotten Tomatoes (79%) ဒီဇာတျကားကတော့ မိတျဆှတေို့ရဲ့ ခံယူခကျြတှေ အသိအမွငျတှကေို ဗွောငျးဆနျစမေယျ့ဇာတျကားပါ။ အသိဉာဏျတှကေို ဇဝဇေဝါအဖွဈစဆေုံးကတော့ အမှနျနှဈခု ထိပျတိုကျတှဆေုံ့လာတဲ့အခါမြိုးမှာ ဖွဈတတျပါတယျ။ ဒီဇာတျကားမှာ......... မငျးသားကွီး A Jay Drvgn က လေးတနျးပဲအောငျတဲ့ မဟုတျမခံ ရိုးသားကွိုးစားသူ..... သူက အသိပညာကို သူ့အလုပျ Cable ရုပျရှငျလိုငျးက ရုပျရှငျဇာတျကားတှကွေညျ့ပွီး ရှာဖှတေတျသူ။ တဈနမှေ့ာတော့ သူ့သမီးလေးရဲ့ မဖှယျမရာ ဗှီဒီယိုကို လူတဈယောကျက ရိုကျကူးပွီး သူ့သမီးနဲ့ သူ့မိနျးမကို အကွပျကိုငျပါတော့တယျ။ဒီမှာပဲ လူသတျမှုတဈခု မရညျရှယျဘဲ ဖွဈပျေါလာပါတယျ။ ဒီလူသတျမှုမှာ သူ့မိသားစုကို ကာကှယျဖို့ မငျးသားကွီး A Jay က သူသိထားတဲ့ အသိပညာကုနျထုတျပွီး ကွိုးစားပါတော့တယျ။ ဒီအမှုမှာ သူရငျဆိုငျရမယျ့ လူက ပေါ့သေးသေးပါပဲ။ ဘယျသူလဲဆိုတော့ ထောကျလှမျးရေးက ရဲခြုပျပါ။ရဲခြုပျက ပါစငျနယျအရရော တာဝနျအရရော ပငျကိုသဘောအရရော ဒီအမှုကို ရကေုနျရခေနျးလိုကျမှာပါ။ ရဲခြုပျအဖွဈ မငျးသမီး တဘူးက ခပျထညျထညျသရုပျဆောငျထားပွီး သူက ...
IMDB: 8.2/10 63,109 votes
Trivisia(2016) မြန်မာစာတန်းထိုး 2016 ခုနှစ် ဧပြီလ ၇ ရက်နေ့ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ ဒီ ဟောင်ကောင်ကားလေးဟာ ဆိုရင်တော့ ခပ်ကြမ်ကြမ်း ကြိုက်တဲ့ ပရိတ်သတ်တွေအတွက် လက်မလွတ်သင့်တဲ့ကားလေးပါ ဇာတ်ကားလေးက IMDb rating က 7/10 ရရှိထားပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးစဉ်မှာလဲ ကုန်ကျစရိတ်တွေ အတော်များတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ် ဇာတ်လမ်း အကျဥ်းးလေးကတော့ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ တခါမှ မတွေ့ဘူးကြတဲံ လူသုံးယောက် ဟာ ကောလဟာလ တစ်ခုကြောင့် ဟောင်ကောင်မြေအောက်လောက ကို ကျင်လည်ကျက်စားရန် ပြောင်းလာခဲ့ရာမှာ ဘယ်လိုတွေဖြစ်ကြမလဲဆိုတာကို ပရိတ်သတ်ကြီးက ရှူစားကြရမှာပါ ။ ဒီကားဟာ အဲ့ခေတ်အဲ့အခါက ဟောင်ကောင်မှာ ကျင်လည် ခဲ့တဲ့ ဂိုဏ်စတားတေရဲ့ ပုံစံ အတိုင်း အပြင်လောကရဲ့ ပုံစံကို ရိုက်ပြထားတယ်လိုတော့ ဆိုပါတယ်Download & Watch On Pcloud
Hitman: Agent 47 (2015) IMDb Rating 5.7 ရရှိထားတဲ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈပါတယျ။အေးဂငျြ့47 ဟာ မြိုးဗီဇပွုပွငျထားတဲ့ အဆငျ့မွငျ့ကွေးစားလူသတျသမားတဈယောကျဖွဈပွီး သူဟာ သာမနျကွေးစား လူသတျသမားထကျ ပိုမိုတဲ့ စှမျးအငျတှရှေိပွီး သူ့ကို အလှယျတကူ သတျဖွတျလို့ မရပါဘူး။ သူ့ဦးခေါငျးနောကျစမှေ့ာ သူ့ကိုယျပိုငျနံပတျ ၄၇ ဆိုတာပါရှိပွီး အဲဒီနရောကို ဖကျြဆီးပဈနိုငျမှာသာ အေးဂငျြ့47လိုမြိုးဗီဇပွငျအဆငျ့မွငျ့ ကွေးစားလူသတျသမားတှကေိုသတျဖွတျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။ဇာတျကားစစခငျြးမှာ အေးဂငျြ့47ဟာ ကောငျမလေး တဈယောကျကို ရှာဖှပေါတယျ။အဲဒီကောငျမလေးဟာ ဥရောပတိုကျကဖွဈပွီးအဲဒီကောငျမလေး နောကျကို အေးဂငျြ့47လိုကျနခြေိနျမှာအေးဂငျြ့47 နောကျကိုလညျး အခွားသူတှကေ လိုကျနပေါတယျ။အေးဂငျြ့ 47 လိုကျရှာနတေဲ့ ကောငျမလေး ကတော့ ကတျတီးယား ဆိုတဲ့ ကောငျမလေးပဲ ဖွဈပါတယျ။ အဲဒီကောငျမလေးဟာ ဘေးကွုံခါနီးမှာ သူ့ဘေးကို ကွိုမွငျနိုငျတဲ့ အစှမျးရှိပွီး အေးဂငျြ့ 47 သူဆီ လာနတောကိုကွိုသိလိုကျတာနဲ့ ခွရောဖြောကျထှကျပွေးပါတယျ။ အေးဂငျြ့47 ကို ခွရောဖြောကျ ပွေးလာတဲ့ ကတျတီးယား မွအေောကျ ဘူတာရုံ ...
IMDB: 7.4/10 83,622 votes
Hateful Eight (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး ကဲဒီတစ်ခါတော့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ထွက် ဘ၀င်မကျစရာ ဇာတ်ကားလေး တကားနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ် ဇာတ်ကားလေး ကတော့ ရုန်းကန်လှုပ်ရှားမှုတွေ မိမိ အသက်၇ှင်ဖို့အတွက် ရက်စက်မှုတွေကို ပြထားတော့ တော်တော် တော့ ရင်မောဖို့ကောင်းတယ် ဗျ တခုရှိတာက မင်းသားတွေက နာမည်ကြီးတွေမို့ Rating မြင့်တာလား ဆိုတော့ ဇာတ်လမ်း ကလည်း မဆိုးဘူးပြောရမှာဗျ ကဲ အောက်မှာ သွား ဒေါင်းကြည့်လိုက်ကြပါအုံးDownload & Watch On Pcloud
Hateful Eight (2015) မြန်မာစာတန်းထိုး
Runner Runner (2013) Richie Furst ဟာ Princeton ကောလိပ်ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကျောင်းလခအတွက် အင်တာနက်မှာ ဒီတစ်ခေါက်မှာ Richie ဟာအင်တာနက်က လူလိမ်တစ်ယောက်ဆီမှာ ပိုက်ဆံတွေရှုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ Richie ကအဲဒီ့လူလိမ်ဖြစ်တဲ့ Ivan Block ဆိုသူရှိတဲ့ Costa Rica နိုင်ငံကိုသွားပြီးပြသနာဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ရောက်တွေ့ပြီတဲ့အခါ Ivan ကစိတ်ဓာတ်ပြင်းပြတဲ့ Richie ကိုသူနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။ Richie ဟာ Ivan ရဲ့ရည်းစားဟောင်း Rebecca Shafran နဲ့ချစ်ကျွမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။ Costa Rica ရောက်နေတဲ့ FBI စုံထောက် Shavers က Richie ကိုပြန်ပေးဆွဲအသက်အန္တရာယ်နဲ့ခြိမ်းခြောက်ပြီး Ivan ရဲ့ပြစ်မှုတွေကိုဝန်ခံဖို့တောင်းဆိုတဲ့အခါ..........။Runner Runner ဟာဒါရိုက်တာ Brad Furman ရဲ့လက်ရာ ရာဇ၀တ်မှုနောက်ခံ သဲထိပ်ရင်ဖိုရုပ်ရှင်ဖြစ်ပြီးအဓိကသရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ် Justin Timberlake (Richie Furst), Gemma Arterton (Rebecca Shavers), Anthony Mackie ...
A Bittersweet Life (2005) အချစ်ကအရာအားလုံးကို စေခိုင်းစေနိုင်ပါသလား??ကျနော်ကတော့အချစ်ကြောင့်ပြောင်းလဲသွားတဲကားလေးတစ်ကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်...၇ နှစ်ကျော်လောက်သူဌေးရဲ့လူယုံအဖြစ်တာဝန်ကျေစွာအမှူ့ထမ်းလာတဲ့လက်မရွံ အတွင်းရေးမှူးလေးတယောက် တာဝန်တစ်ခုကိုထမ်းဆောင်ရင် ကောင်မလေးတစ်ယောက်အပေါ်သံယောဇဉ်ဖြစ်ပီသွားတဲ့အခါ ...သူယုံကြည်ထားသူထံကနေ သစ္စာဖောက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့အခါ...ဘယ်လိုတွေဆက်ပီးဖြစ်လာမလဲ...အချစ်ရေးထက် မေတ္တာဘွဲ့ကိုအဓိကအခြေခံထားတဲ့ အက်ရှင်ကြမ်းကြမ်းကားကောင်းလေးတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်...စိတ်မခိုင်သူသူများအဖို့ မျက်ရည်ကျလောက်သော ကားလေးတစ်ကားဆိုလည်းမမှားပါဘူး...အတိကျနားလည်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒေါင်းပြီးကြည့်ရှု့အားပေးနိုင်ပါတယ်..File Size : 850 MB Quality : Blu ray 720P Running Time : 2hr Format : Mp4 Genre : Action, Drama, Crime Encoder : Joker.phs(ဇာတ်ကားအညွန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Moe Myint Lwinပဲဖြစ်ပါတယ်)
Keeping Mum (2005) Keeping Mum (2005)_______IMDb - 6.8/10Keeping Mum သညျ ဇာတျ ကား လေးကို ကိုပွညျ ဟိနျးစိုးရဲ့ တိုကျ တှနျးမှု့ ကွောငျ့ ဘာသာပွနျ ဖွဈ သှားခဲ့တာပါIMDb 6.8 ရရှိပွီး Rotten Tomatoes မှာ တော့ 56% rating ရရှိခဲ့ပါတယျ သညျ ဇာတျ ကားထဲမှာဆိုရငျ မစ်စတာဘငျးနျ ကို ကြ နျော တို့မွငျ တှေ့ နကြေ ပုံစံမြိုးနဲ့မဟုတျ ပဲ မတူကှဲပွားတဲ့ ဇာတျ ကောငျ စရိုကျ နဲ့ တှမွေ့ငျ ရမှာပါ ပွီး တော့ သညျ ဇာတျ ကားဟာရသမြိုးစုံကိုလညျးပေးစှမျးနိုငျ မှာပါလူသားတဈ ယောကျ ရဲ့ စိတ်တဇဆနျ ...
IMDB: 6.8/10 32,423 votes
Triple9(2016) မြန်မာစာတန်းထိုး အမေရိကန် Crime Thriller Darama ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်သည့် Tripple9ကို ယခုအပတ်မှာမိတ်ဆက် ညွှန်းဆိုပေးလိုက်ပါတယ်။Tripple9ကိုရိုက်သည့် ဒါရိုက်တာကတော့ John Hillcoat ဖြစ်ကာ သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း ပရိသတ်ကြီးနှင့်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်သည့် Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie Aaron Paul, Norman Reedus, Woody Harrelson ESith Kate Winslet တို့ က အဓိကပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်ကားကို ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၆ ရက်နေ့ ကစပြီး နိုင်ငံတစ်ကာမှာရုံတင်ပြသခဲ့တာပါ။ ဇာတ်လမ်း အကျဉ်းကတော့ . . . Georgia ပြည်နယ် Atlanata မြို့ မှာ ဒုစရိုက်သမားတွေဖြစ်သည့် Micheal Atwood, Russel Welch နှင့် သူ့ရဲ့  ...
Born to Fight (2004) ဒီဇာတျကားလေးကတော့ကြှနျတျောရဲ့ ပဉ်စမမွောကျဘာသာပွနျဇတျကားလေးပါ အကျရှငျကားကောငျးကောငျးကို မှကွိုကျတဲ့ပရိတျသတျတှအေကွိုကျတှမေ့ယျ့ကားတဈကားပါပဲ ကြှနျတျောထိုငျးအကျရှငျကားတှဆေိုရငျ(tonny jaa)ရယျ ဒီမငျးသားရယျပါတဲ့ကားတှကေိုအကွိုကျဆုံးပါပဲ ထိုးသတျမှုတှကေမာနျပါသလိုတကယျ့ကိုအကျရှငျရသ ပေးစှမျးနိငျတဲ့ကားတှဖွေဈလို့ပါပဲဒီ ဇာတျကားလေးကတော့အကျရှငျဆိုပမေဲ့ဇတျလမျး ဇာတျကှကျတှလေညျးပါတာကွောငျ့ပရိတျသတျ တှစေိတျကနြေပျမှုရစမှောပါ အညှနျးမရေးခငျကြှနျတျောနညျးနညျးထပျဖွညျ့ပေးပါရစေ ဒီဇတျကားလေးမှာကြှနျတျောတှရေ့သလောကျကတော့ စညျးလုံးညီညှတျမှုရယျနိငျငံတျောနဲ့နိငျငံတျောသီခငျြးကို ခဈြမွတျနိးတာကိုတှရေ့ပါတယျ ကြှနျတျောတို့အလုပျမှာဆိုရငျသူဌေးကတခါတလလောရငျ ဂပြနျနဲ့မွနျမာလူမြိူး Communicationရစအေောငျဆိုပွီး နိငျငံတျောသီခငျြးဆိုခိုငျးတတျပါတယျ ကြှနျတျောတို့တှကေတော့ကိုယျ့နိငျငံတျောသီခငျြးကို အကယျြကွီးဆိုကွတာပေါ့ ဆိုနတေဲ့အခြိနျမှာကွကျသီးထလောကျအောငျခံစားရပါတယျ နိငျငံခွားရောကျနတေဲ့လူတှပေိုသိမှာပါ ဟိုတလောကကြှနျတျောfacebookမှာ ဖတျလိုကျရပါတယျမွနျမာနိငျငံမှာ ရုပျရှငျ မပွခငျနိငျငံတျောသီခငျြးဆိုတဲ့အခြိနျမှာဆိုနတေဲ့လူတှကေို အနောကျကနေ ကဲ့ရဲ့တယျဆိုတဲ့သတငျးပါ ဟုတျမဟုတျတော့မသိပါဘူး ဒါပမေဲ့အဲလိုတော့ဘယျလိုမှမဖွဈသငျ့ပါဘူး ကြှနျတျောနိငျငံတျောသီခငျြးအကွောငျးပွောရငျး မွနျမာဇတျကားတဈကားကိုသတိရမိပါတယျ တိုကျပှဲချေါသံပါ အားလုံးလညျးသိမှာပါ ဒါကွောငျ့ကြှနျတျောပွောခငျြတာကနိငျငံတျောသီခငျြးကို ကြှနျတျောတို့အားလုံးအလေးထားသီဆိုကွပါစို့လို့ပွောခငျြပါတယျ အားလုံးဖတျရှုပေးတဲ့အတှကျကြေးဇူးတငျပါတယျ ဇာတျကားအညှနျးကိုပွောရရငျတော့ နိငျငံတျောကဖမျးဆီးထားတဲ့မှောငျခိုရာဇာကွီး တဈယောကျကိုလကျအောကျငယျသားတှကေ နယျစပျရှာကလေးကိုဓါးစားခံလုပျပွီးကယျတငျဖို့ ကွိူးစားတာကိုရိုကျကူးထားတာပါ နယျစပျရှာကလေးကိုရောကျရှိနတေဲ့ အားကစားသမားမြားနဲ့လူဆိုးတှရေငျဆိုငျပုံကို သသေသေပျသပျရိုကျကူးထားတာပါ ထိုငျနိငျငံရဲ့နာမညျကွီးလကျဝှသေ့မားတှေ တိုကျကှမျဒိုသမားတှေ အားကစားသမားစုံစုံညီညီပါဝငျထားပါတယျ ဒေါငျးလော့ဆှဲပွီးကွညျ့လိုကျကွပါအုံး (ဇာတျကားအညှနျးနဲ့ ဘာသာပွနျသူကတော့ ကို Soe Htwe (ခတ်ေတ ဂပြနျ) ပဲ ဖွဈပါတယျ) ----------------------------------------------------------------- ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ ပဉ္စမမြောက်ဘာသာပြန်ဇတ်ကားလေးပါ အက်ရှင်ကားကောင်းကောင်းကို မှကြိုက်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေအကြိုက်တွေ့မယ့်ကားတစ်ကားပါပဲ ကျွန်တော်ထိုင်းအက်ရှင်ကားတွေဆိုရင်(tonny jaa)ရယ် ဒီမင်းသားရယ်ပါတဲ့ကားတွေကိုအကြိုက်ဆုံးပါပဲ ထိုးသတ်မှုတွေကမာန်ပါသလိုတကယ့်ကိုအက်ရှင်ရသ ပေးစွမ်းနိင်တဲ့ကားတွေဖြစ်လို့ပါပဲဒီ ဇာတ်ကားလေးကတော့အက်ရှင်ဆိုပေမဲ့ဇတ်လမ်း ဇာတ်ကွက်တွေလည်းပါတာကြောင့်ပရိတ်သတ် တွေစိတ်ကျေနပ်မှုရစေမှာပါ အညွန်းမရေးခင်ကျွန်တော်နည်းနည်းထပ်ဖြည့်ပေးပါရစေ ဒီဇတ်ကားလေးမှာကျွန်တော်တွေ့ရသလောက်ကတော့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုရယ်နိင်ငံတော်နဲ့နိင်ငံတော်သီချင်းကို ချစ်မြတ်နိးတာကိုတွေ့ရပါတယ် ကျွန်တော်တို့အလုပ်မှာဆိုရင်သူဌေးကတခါတလေလာရင် ဂျပန်နဲ့မြန်မာလူမျိူး Communicationရစေအောင်ဆိုပြီး နိင်ငံတော်သီချင်းဆိုခိုင်းတတ်ပါတယ် ကျွန်တော်တို့တွေကတော့ကိုယ့်နိင်ငံတော်သီချင်းကို အကျယ်ကြီးဆိုကြတာပေါ့ ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာကြက်သီးထလောက်အောင်ခံစားရပါတယ် နိင်ငံခြားရောက်နေတဲ့လူတွေပိုသိမှာပါ ဟိုတလောကကျွန်တော်facebookမှာ ဖတ်လိုက်ရပါတယ်မြန်မာနိင်ငံမှာ ရုပ်ရှင် မပြခင်နိင်ငံတော်သီချင်းဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုနေတဲ့လူတွေကို အနောက်ကနေ ကဲ့ရဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိပါဘူး ဒါပေမဲ့အဲလိုတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်သင့်ပါဘူး ကျွန်တော်နိင်ငံတော်သီချင်းအကြောင်းပြောရင်း မြန်မာဇတ်ကားတစ်ကားကိုသတိရမိပါတယ် တိုက်ပွဲခေါ်သံပါ အားလုံးလည်းသိမှာပါ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကနိင်ငံတော်သီချင်းကို ကျွန်တော်တို့အားလုံးအလေးထားသီဆိုကြပါစို့လို့ပြောချင်ပါတယ် အားလုံးဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဇာတ်ကားအညွန်းကိုပြောရရင်တော့ နိင်ငံတော်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့မှောင်ခိုရာဇာကြီး တစ်ယောက်ကိုလက်အောက်ငယ်သားတွေက နယ်စပ်ရွာကလေးကိုဓါးစားခံလုပ်ပြီးကယ်တင်ဖို့ ကြိူးစားတာကိုရိုက်ကူးထားတာပါ နယ်စပ်ရွာကလေးကိုရောက်ရှိနေတဲ့ အားကစားသမားများနဲ့လူဆိုးတွေရင်ဆိုင်ပုံကို သေသေသပ်သပ်ရိုက်ကူးထားတာပါ ထိုင်နိင်ငံရဲ့နာမည်ကြီးလက်ဝှေ့သမားတွေ တိုက်ကွမ်ဒိုသမားတွေ အားကစားသမားစုံစုံညီညီပါဝင်ထားပါတယ် ဒေါင်းလော့ဆွဲပြီးကြည့်လိုက်ကြပါအုံး (ဇာတ်ကားအညွန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ ကို Soe Htwe (ခေတ္တ ဂျပန်) ပဲ ဖြစ်ပါတယ်) File Size : 685 MB Quality : Blu ray 720P Running Time : 1hr 32 minute Format : Mp4 Genre : Action, Drama, Crime Encoder : Joker.phs
My Beloved Bodyguard(2016) မြန်မာစာတန်းထိုး ဒီဇာတ်ကားလေးမှာအဓိကကတော့တရုတ်ဖတ်တီးမင်း သားခေါ်ဆူမိုဟန်ကအဓိကပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်အက်ရှင်ဒရာမာ ရောထားတဲ့ဇာတ်ကားကောင်း လေးတစ်ကားဆိုလည်းမမှားပါဘူးမင်းသားအန်ဒီလျူ အပါအဝင်ဝါရင့်သရုပ်ဆောင်အများအပြားလည်းသ ရုပ်ဆောင်ထားတာမို့လည်းပရိတ်သတ်တွေအကြိုက် တွေ့မယ်ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်လာမှာဧကန်ပါပဲမြေးမလေးပျောက်ဆုံးသွားပြီးအရူးတစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး သောကပွေနေရသောအဖိုးကြီးဒင်အိမ်နီးချင်းကောင် မလေးတစ်ယောက်ကိုမြေးမလေးအစားသံယောဇင် တွယ်တာမိပြီးအဖိုးအရင်းတစ်ယောက်လိုစောင့် ရှောက်ချင်ခဲ့သည့်ဒင်ဒင်ကိုတစ်ဖက်သတ်သံယော ဇင်တွယ်မိနေသည့်အိမ်နီးချင်းကိုရီးယားလူမျိူးအဖွား ပက် အဖေနဲ့အမေကွဲနေသည့်အတွက်စိတ်ဒဏ်ရာရ ပြီးဒင်ကိုအဖိုးရင်းတစ်ယောက်လိုသံယောဇင်တွယ် မိနေသည့်သမီးလေးချယ်ရီလီထိုလူသုံးလေးဦးကြား တွင်တရုတ်မာဖီးယားဂိုဏ်းနဲ့ရုရှားမာဖီးယားဂိုဏ်းတို့ ရှုပ်ထွေးလာတဲ့အချိန်မှာဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲရဲမှုးဟောင်းတစ်ဦးအဖြစ်လဲသိုင်းပေါင်းစုံကျွမ်းကျင်တဲ့အဖိုး ကြီးဒင်ကကောချယ်ရီလီလေးကိုဘယ်လိုကာကွယ် စောင့်ရှောက်မလဲစသဖြင့်ဒရာမာအက်ရှင်ဟာသအစုံ အလင်ရသတွေနဲ့ပရိတ်သတ်တွေကိုရင်ခုန်မှုကိုပေး မယ့်ဇာတ်ကားတစ်ကားကိုကျွန်တော်(စိုးထွေး)ရဲ့၂၄ ကားမြောက်ဘာသာပြန်ကားလေးအဖြစ်တင်ဆက် လိုက်ပါတယ်အမြန်သာဒေါင်းလော့ဆွဲကြပါလို့တိုက် တွန်းလိုက်ပါရစေFile Size : 780 MB Quality : Blu ray 720P Running Time : 1hr 39 minute Format : Mp4 Genre : Action, Drama, Crime Encoder : Joker.phsDownload And watch With Pcloud Link Full HD(ဇာတ်ကားအညွန်းနဲ့ ဘာသာပြန်သူကတော့ Soe Htwe ပဲ ...
The Italian Job (2003) UnicodeShooter မငျးသား Mark Wahlberg ၊ Transporter မငျးသား Jason Statham တို့အပွငျ တဈခွားသော သရုပျဆောငျကောငျးမြားစှာပါဝငျထားပွီး အခုနာမညျကွီးနတေဲ့ Mad Max: Fury Road ဇာတျကားထဲက မငျးသမီး Charlize Theron တို့ပါဝငျထားတဲ့ နာမညျကွီး ဇာတျကားကောငျးဖွဈပါတယျ။ IMDb Rating (7/10)ထိရရှိထားတဲ့ Action, Crime, Thriller အမြိုးအစားဇာတျကားဖွဈပါတယျ။ ဇာတျလမျးအကဉျြးကို မိတျဆကျမပေးတော့ပါဘူး။ မကွညျ့ရသေးရငျ သခြောပေါကျကွညျ့သငျ့တဲ့ဇာတျကားဖွဈပွီး ကွညျ့ပွီးသှားရငျလဲထပျကွညျ့လို့ မပငျြးစရေဘူးဆိုတာ အာမခံပေးလိုကျပါတယျ။ ကြှနျတျောအကွိုကျဆုံးဇာတျကားတဈကားဖွဈပွီး သတိရတိုငျးပွနျကွညျ့မိတဲ့ဇာတျကားပါ။ZawgyiShooter မင်းသား Mark Wahlberg ၊ Transporter မင်းသား Jason Statham တို့အပြင် တစ်ခြားသော သရုပ်ဆောင်ကောင်းများစွာပါဝင်ထားပြီး အခုနာမည်ကြီးနေတဲ့ Mad Max: Fury Road ဇာတ်ကားထဲက မင်းသမီး Charlize Theron တို့ပါဝင်ထားတဲ့ နာမည်ကြီး ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ IMDb Rating (7/10)ထိရရှိထားတဲ့ ...
IMDB: 7.0/10 333186 votes